ပိုလီယိုရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ပိုလီယို ကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျွေးနေပုံ
ပိုလီယိုရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Polio vaccine)သည် ပိုလီယိုအကြောသေရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသော ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးမှာ အမျိုးအစား (၂)မျိုးရှိသည်။ တစ်မျိုးမှာ အသက်မရှိတော့သော ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ထိုးဆေး(IPV)ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ အားပျော့အောင်ပြုလုပ်ထားသော ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး သောက်ဆေး(OPV)ဖြစ်သည်။ ကလေးများအားလုံးကို ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးပေးသင့်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ နိုင်ငံအများစုတွင် ဤကာကွယ်ဆေး(၂)မျိုးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုလီယိုရောဂါကင်းစင်ခဲ့ကြပြီး လူနာသစ်များ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် လျော့နည်းလာခဲ့သည်။ (၁၉၈၈)ခုနှစ်တွင် ပိုလီယိုလူနာပေါင်း (၃၅၀ဝ၀ဝ)ခန့်မှ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် (၃၅၉) ယောက်သာ ရှိတော့သည်။
ထိုးဆေးမှာ အလွန်စိတ်ချရသည်။ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် အနည်းငယ်နီရဲခြင်းနှင့် နာကျဉ်ခြင်းသာ ဖြစ်တတ်သည်။ သောက်ဆေးအသုံးပြုသောလူများအယောက်တစ်သန်းတွင် (၃) ယောက်ခန့် ကာကွယ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်နေသော ပိုလီယိုအကြောသေရောဂါ (vaccine-associated paralytic poliomyelitis) ဖြစ်တတ်သည်။ ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများနှင့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး (HIV)/ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ကူးစက်ခံနေရသော သူများတွင်ပါ စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပထမဆုံး အသက်မရှိတော့သောပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးကို ဂျိုးနပ်စ်ဆော့ခ် (Jonas Salk)မှ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး (၁၉၅၅)ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သောက်ဆေးကို အယ်လ်ဘတ် စဘင် (Albert Sabin)မှ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး (၁၉၆၁)ခုနှစ်တွင် စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် သောက်ဆေးတစ်လုံး၏ လက်ကားဈေးမှာ (ဝ.၂၅) ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ထိုးဆေးတစ်လုံးကို (၂၅-၅၀) ဒေါ်လာခန့် ပေးရသည်။ 
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Polio vaccines: WHO position paper, January 2014." (Feb 28, 2014). Wkly Epidemiol Rec 89 (9): 73–92. PMID 24707513.
↑ Aylward RB (2006). "Eradicating polio: today's challenges and tomorrow's legacy". Annals of Tropical Medicine and Parasitology 100 (5–6): 401–13. doi:10.1179/136485906X97354. PMID 16899145.
↑ Poliomyelitis: Fact sheet N°114။ World Health Organization (Oct 2015)။ 14 Dec 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Pioneering figures in medicine: Albert Bruce Sabin--inventor of the oral polio vaccine." (2005). The Kurume medical journal 52 (3): 111–6. doi:10.2739/kurumemedj.52.111. PMID 16422178.
↑ Vaccine, Polio။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hamilton၊ Richart (2015)။ Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition။ Jones & Bartlett Learning။ p. 316။ ISBN 978-1-284-05756-0။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပိုလီယိုရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=288719" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၃:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။